Tue, Jul 14, 2020 at 2:45am
बाँकेमा निर्वाचन क्षेत्र कस्तो हुने ?
शुक्रबार, श्रावन २०, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन १४ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले शनिबार नेपालगन्जमा राय सुझाव संकलन गरेको छ । आयोगका सदस्य माधव अधिकारी नेतृत्वको आयोगको टोलीले कस्तो निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक सुझाव लिन आयोग जिल्ला पुगेको बताए । २१ दिने अवधी पाएको आयोगले कम्तिमा प्रदेशका ठुला शहरमा पुगेर राय सुझाव लिन थालेको अधिकारीले बताए । संविधान अनुसार सङ्घमा १६५ र प्रदेशमा ३३०..
सत्तापक्षकै सांसदहरु संशोधनको विपक्षमा भोट हाल्दैछन–घर्ती
मंगलवार, श्रावन १७, २०७४ साल
बाँके, साउन ११ – नेकपा एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीले सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत नपुगेका कारण नै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुगेको भए माघ अघि नै संशोधन भईसक्थ्यो, सचेतक घर्तीले बुधबार नेपालगन्जमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने,– राष्ट्रघाती संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नका लागि सरकारसँग प्रर्याप्त सङ्ख्या छैन् । उनले..
नेपालगन्जमा पुर्बप्रधानमन्त्री नेपालको भेटघाट
नेपालगन्ज, साउन ११ । प्रदेश नम्बर ५ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको दुई दिने अभिमुखिकरणमा सहभागी हुन नेपालगन्ज आएका नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका छन् । उनले अभिमुखिकरणमा सहभागी हुन आएका केन्द्रीय र प्रदेश स्तरीय नेता तथा एमालेबाट विजयी जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका हुन् । अभिमुखिकरणलाई सम्बोधन गर्दै उनले नमुनायोग्य काम गर्न जनप्रतिनिधीलाई सुझाव दिए । नेता नेपालले प्रदेश नम्बर..
प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधीलाई नेपालगन्जमा अभिमुखिकरण
नेपालगन्ज, साउन १० गते । नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर ५ मा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुका लागि दुईदिने अभिमुखिकरण मङ्गलबारदेखि नेपालगन्जमा सुरु गरेको छ । अभिमुखिकरणको नेकपा एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमले उद्घाटन गरे । उनले दुई नम्बर प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा एमाले पहिलो दल बन्ने दावी गर्दै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । अभिमुखिकरणमा एमालेका उपमहासचिव तथा..
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी विकास र जनसेवाका सारथी–खिमलाल भट्टराई
नेपालगन्ज,साउन १० । नेकपा एमालेका युवा नेता खिमलाल भट्टराईले स्थानीय तहबाट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विकास र जनसेवामा केन्द्रीत हुने बताएका छन् । मंगलबार लोकप्रियसँगको कुराकानीमा नेता भट्टराईले जनप्रतिनिधीलाई विकास र जनसेवामा केन्द्रीत गर्नेगरी मार्ग निर्देशन गर्न उनीहरुलाई देशब्यापी प्रशिक्षण दिइएको बताए । प्रदेश नम्बर ५ का जनप्रतिनिधीहरुको प्रशिक्षण मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । यसैबीच भट्टराईले नेकपा माओवादीले केन्द्रले अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको..
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी नेपालगन्ज पनि हुन सक्छ –पौडेल
सोमबार, श्रावन ९, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन ९ गते । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक बिष्णु पौडेलले प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी प्रदेशसभाको बहुमतको आधारमा यसभित्रका जुनसुकै स्थानमा हुन सक्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी बाँकेले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने,– प्रदेशको बहुमतले राम्रो लागेमा दाङ, बुटवल र नेपालगन्ज मात्रै नभई बर्दिया, प्युठान र रोल्पामा पनि राजधानी बनाउन..
कोहलपुर नगर कार्यपालिकामा एमाले विजयी
बुधबार, श्रावन ४, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन ४ गते । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई पुर्णता दिनका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । निर्वाचित महिला सदस्यबाट ५ जना र दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना गरि ८ पदका लागि बुधबार भएको कार्यपालिकाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु बिजयी भएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी मिलेर एमालेलाई एक्ल्याएको बदला..
जानकीमा एमालेलाई भाग्यको साथ
सोमबार, श्रावन २, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन २ गते । प्रमुखमा नेपाली काँग्रेससँग झिनो मतान्तरले विजयी भएको नेकपा एमालेलाई कार्यपालिकाको निर्वाचनमा भाग्यले साथ दिएको छ । गोलाप्रथाबाट ५ जना उम्मेदवार छनौट गरिदा चारजना एमालेका उम्मेदवार परेका छन् । जानकी गाउँपालिकामा कार्यपालिकलाई पुर्णता दिनका लागि सोमबार भएको निर्वाचनमा अधिकाँश पदमा गोलाप्रथाको आधारमा विजयी घोषित गरिएको हो । दलित वा अल्प संख्यकबाट नेकपा एमालेका राजकुमार धोवी..
डुडुवा कार्यपालिकामा काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवार बिजयी
नेपालगन्ज, साउन २ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा कार्यपालिका पुर्णताका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । चारजना महिला सदस्यमा २ जना काँग्रेस र २ जना एमालेका बिजयी भएका छन् । दलित वा अल्पसंख्यकमा २ जना काँग्रेसका बिजयी भएका छन् । ३२ जना मतदाता रहेकोमा ३१ म्त खसेको थियो । फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवारले..
विकासे योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन
मंगलवार, आषाढ २७, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार २७ – बाँके जिल्लामा संचालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका विकासे योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३\_०७४ सम्पन्न हुन लागेको बेला जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामा संचालनमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको अन्तिम अवस्था बारे जानकारी लिन स्थलगत अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । जिल्लामा रहेका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरुको अनुगमन गरेर सम्पन्न..
शिक्षक संगठनको बधाई
कोहलपुर, असार २७ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन , बैजनाथ गाउपालिका समितीको आयोजनामा नबनिर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष खुमलाल शर्माले शिक्षा क्षेत्रलाई बिशेष ध्यान दिन नबनिर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै जनप्रतिनिधिले चुनाबको समयमा जनतासंग गरेका बाचा पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमा संगठनका बाँके जिल्ला अध्यक्ष एकदेब पन्थीले जनप्रतिनिधिहरु शासक नभई सेबकको..
नरैनापुरमा ८७० घरमा सोलार पुग्दै
बाँके, असार २७ – बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद दिनेशचन्द्र यादवको अगुवाई र पहलमा नरैनापुर गाउँपालिकाका २ वटा वडामा सोलार जडान गरिने भएको छ । केही दिनभित्रै घरधुरीमा सोलार जडान गरिने सांसद यादवले बताए । सोलार खरिदका लागि सांसद यादवको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट छुट्टाइएको बजेटमा नेपाल सरकारले थप अनुदान समेत दिएको छ । साविक..
दुई पटकका गाविस अध्यक्ष अहिले वडा सदस्य
बाँके, असार २७ गते । देवप्रसाद बुढा मगर नेकपा एमाले बाँकेका पुराना नेता हुन । जनतामाझ लोकप्रिय बुढा २०४९ र २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट तत्कालिन राधापुर गाविसबाट निर्वाचित गाविस अध्यक्ष हुन् । बुढाले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रत्यासी भएर अत्याधिक बहुमतले बिजयी भए । दुई पटक कार्यकारी प्रमुख गाविस अध्यक्ष भईसकेका बुढा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खजुरा गाउँपालिका वडा..
एमाले निषेधमा धवल शम्शेर
सोमबार, आषाढ २६, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार,२६ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिमा नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीचको एलायन्स धरापमा परेको छ । एमालेसँग जिल्ला समन्वय समितिको उपससभापति र दुई सदस्य लिने गरी डुडुवा, जानकी र नरैनापुरका लागि सहमती गरेको फोरम नेपालले आफुले सभापति पाउने गरी काँँग्रेस लगायतका दलसँग पुनः अर्को सहमती गरेको स्रोतले जनाएको छ । फोरम बाँकेका प्रबक्ता सम्शुल हक राईले सहमती..
प्रदेश नम्बर ५ मा कसले कुन तह जिते ?
नेपालगन्ज, असार २६ गते । दोस्रोचरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेश नम्बर ५ मा एमाले पहिलो भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ का १०८ स्थानीय तहमध्ये नेकपा एमाले ४३ तह जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ । यसैगरी नेपाली काँग्रेस, ३३, नेकपा माओवादी केन्द्र १९, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल ६, लोकतान्त्रिक फोरम २, राजमो २ र स्वतन्त्र ३ तहमा..
फोरमसँग एमालेको औपचारिक सहमती
आईतवार, आषाढ २५, २०७४ साल
बाँके, असार २५ गते । नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्थानीय तहका लागि औपचारिक सहमती गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिसहित स्थानीय तहमा पनि सहकार्य गरेका छन् । डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा सहकार्य गर्ने निर्णयमा जिसससहित डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा कार्यपालिका गठनका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सहमती भएको हो । एमाले बाँकेका अध्यक्ष अशोक कोइराला र संघीय समाजवादी..
फोरमका ५ नेता कारवाहीमा
शनिबार, आषाढ २४, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार २४ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाललबे बाँकेका ५ जना नेतालाई कारवाही गरेको छ । पार्टीको निर्णय बिपरित उम्मेदवारी दिलाउने र निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको भन्दै नेताहरु जगदिशबहादुर सिंह, कामताप्रसाद खटिक, राजेन्द्र बिश्वकर्मा, कौसलकुमार मिश्रा र ममता बानियालाई कारवाही गरिएको हो । कारवाही गरिएका मध्ये सिंह र खटिक पुर्ब केन्द्रीय सदस्य हुन भने मिश्रा पुर्ब जिल्ला अध्यक्ष हुन् । ..
कोहलपुरलाई सुन्दर शहर बनाउने प्रतिवद्धता
कोहलपुर, असार २४ । पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका नवनर्विाचित पदाधिकारीहरुको शनिबार सपथग्रहण गर्दै सुन्दर कोहलपुर बनाउने अभियानमा साथ दिन नगरबासीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । शनिबार निर्वाचन अधिकृत टेकबहादुर थापाबाट सपथग्रहण गरेपछि प्रमुख लुटबहादुर रावतले सफा, सुन्दर रस्मार्ट सिटी बनाउने सपना भएको भन्दै यसमा सबैको सहयोगको उत्तिकै खाँचो रहेको बताए । नगर प्रमुख रावतले कोहलपुरलाई स्वस्थ शहर बनाउँदै यसको..
नेपालगन्ज, असार २४ । बाँकेको खजुरा गाउँपाालिकाका प्रमुख किस्मत कक्षपतिले नमुना गाउँपालिका बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले खजुरा गाउपालिकाका जनताप्रती उत्तरदायी हुँदै जनतको अभिमतको कदर गर्दै नमुना गाउपालिका बनाउने अभियानमा अर्जुनदृष्टिका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका हुन । यसैेगरी खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एकमाया विकले पनि पदभारग्रहण गरेकी छन् ।..
बाँकेमा एमाले र फोरमबीच सहकार्य
बिहिवार, आषाढ २२, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार २२ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका लागि नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच मिलेर जाने सहमती भएको छ । हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त शक्ति सन्तुलनका आधारमा दुई पार्टीबीच सहकार्य गर्ने निर्णय भएको एमाले बाँकेका सचिव रत्न खत्रीले बताए । जिल्ला समन्वय समितिमा सभापति, उपसभापतिसहित ९ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । जसमा ८ तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी..
नेपालगन्ज, असार २२ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको सपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण बिहिवार सम्पन्न भएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा खचाखच भरिएको नगरबासीको सहभागिताकाबीचमा भएको सपथग्रहण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलले नव निर्वाचित प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणा, उपप्रमुख उमा थापा मगर र २३ वटा वडाका वडा अध्यक्षहरुलाई प्रमाणपत्र बितरण र सपथग्रहण गराए..
मतदातालाई एमाले बाँकेको धन्यवाद
नेपालगन्ज, असार २२ । नेकपा एमाले बाँकेले स्थानीय तहकोे दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने आम मतदाता लगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छ । अध्यक्ष अशोक कोइरालाले बिज्ञप्ती जारी गरि जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये ४ वटामा पार्टीका उम्मेदवारहरु विजयी भएको र अन्य ४ वटा स्थानीय तहमा पनि पार्टीका उम्मेदवारहरुले सम्मानजनक मत पाउन सफल भएको जनाएका छन् । तराई मधेसको जिल्ला..
बाँकेमा मतगणना सकियो, कसले कहाँ जिते
बुधबार, आषाढ २१, २०७४ साल
बाँके, असार २१ गते । बाँकेका सम्पुर्ण ८ वटा स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ । ८ तह मध्ये चार तहमा नेकपा एमाले, २ तहमा नेपाली काङ्ग्रेस , १ तहमा राप्रपा र १ तहमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल बिजयी भएको छ । एमालेले कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकामा विजयी भएको छ । काँग्रेस राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिका ,..
कोहलपुरमा एमाले बिजयी
कोहलपुर,असार २१ । बाँकेकोे कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमाले बिजयी भएको छ । काँग्र्रेसका भानुभक्त भटट्राईलार्ई हराउदै एमालेक लुट बहादुर रावत पमुखमा बिजयी भएका हुन । उपप्रमुखमा काँग्रेसका सन्जु चौधरी बिजयी भएका छन । यसको औेपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेकोे सहकर्मी बिनोद भट्टरार्ईले जानकारी दिएका छन् । ..
कोहलपुरमा काँग्रेस अगाडी
नेपालगन्ज, असार २१ गते । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेलाई पछि पार्दै नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । वडा नम्बर ८ को १ हजार ६३२ मत गणना हुन बाँकी रहदासम्म काँग्रेसका भानुभक्त भट्टराईले ८ हजार ३०४ मतपाएका छन् । एमालेका लुट बहादुर रावतको ८ हजार २१८ र माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र न्यौपानेको ६ हजार ८५ मत रहेको छ । उपप्रमुखमा काँग्रेसका सन्जु..
खजुरा गाउँपालिकामा एमालेका किस्मत कक्षपति र एकमाया विक बिजय
मंगलवार, आषाढ २०, २०७४ साल
बाँके, असार २० गते । खजुरा गाउँपालिकामा एमालेका प्रमुखका उम्मेदवार किस्मत कक्षपति र उपप्रमुखका उम्मेदवार एकमाया विक बिजय भएका छन् । औपचारिक घोषणा हुन बाकी छ । बिजयको खुशियालीमा एमाले समर्थक र कार्यकर्ता रमाइरहेका छन् । ..
नेपालगन्जमा राप्रपा र काँग्रेसको बिजयउत्सव
बाँके, असार २० गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा बिजयी उम्मेदवाररहरुले नेपालगन्जमा बिजयी याली निकालेका छन् । मेयरमा निर्वाचित डा. धवल शम्शेर राणाको पार्टी राप्रपा र उपमेयरमा निर्वाचित उमा थापा मागरको पार्टी नेपाली काँग्रेसले अलग–अलग याली निकालेका हुन । यालीमा पार्टीका कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरु सहभागी भएका थिए । राप्रपाको बिजय यालीलाई त्रिभुवनचौकमा सम्बोधन गर्दै मेयर डा. राणाले नेपालको विकासका लागि..
८३ मतको. अन्तरले जानकीको प्रमुखमा एमालेका रामनिवास यादव बिजयी
जानकीको सम्पुर्ण मतगणना सकियो । नेकपा एमालेका रामनिवास यादव ८३ मतको. अन्तरले प्रमुखमा बिजयी । एमालेका भूमिसरा धिताल उपप्रमुखमा बिजयी ।..
जानकीमा एमाले बिजयी
नेपालगन्ज, असार २० बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका रामनिवास यादव प्रमुख र भुमिसरा धिताल उपप्रमुखमा बिजयी भएका छन् । यादवले नेपाली काँग्रेसका छब्बन खाँलाई झिनो मतले पराजित गरि प्रमुखमा बिजयी भएका हुन् । यसको आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी छ । गनापुरमा एमालेका रामसुरेश यादव वडा अध्यक्ष र बेलहरीमा एमालेका रमेश बर्मा बिजय भएका छन् । यसैगरी बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा एमालेका प्रमुख..
कोहलपुरमा एमालेको अग्रता कायमै
एमाले लुट बहादुर रावत ६५०४ र कृष्ण चौधरी ६८७३ काँग्रेस भानुभक्त भट्टराई ६२०६ र सन्न्जु थारु ६७५८ माओेवादी नरेन्द्र न्यौपाने ५१२९ र देबी थारु ४२१५ घोषणा हुन बाँकी बाँकेकाो खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा एमालेको अग्रता । ८ तह मध्ये डुडुवा र राप्ती साोनारीमा काँग्रेस बिजयी, नररैननापुरमा फोररम नेपाल बिजयी रर बैजनाथमा एमाले बिजयी भईसकेको । खजुरा एमाले ६७९४ \_ ६८४२ माओवादी ५४७४\_ ४९३२ काँग्रेस २७७७ \_ ३०५२ ..
Results 1048: You are at page 24 of 35